တနင်္သာရီဒေသ ကျားကသည့် အစဉ်အလာကို ဖော်ညွှန်းမည့် 'ကျားနှင့် ဆင်' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒီဇင်?? - Yangon Media Group
တနင်္သာရီဒေသ ကျားကသည့် အစဉ်အလာကို ဖော်ညွှန်းမည့် ‘ကျားနှင့် ဆင်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒီဇင်??
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အစဉ်အလာတစ်ခု ဖြစ်သော ကျားကသည့်အစဉ်အလာကို အခြေခံကာရိုက်ကူးမည့် ”ကျားနှင့် ဆင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် စတင်ရိုက်ကူးမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ”ကျားနှင့်ဆင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဘက်တွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံး အချိန်ယူကာ ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီဇာတ်ကားက သာမန်ကာလျှံကာ အင်္ကျီလဲပြီးတော့ ရိုက်လို့မရဘူး။ အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် မင်းသားရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျွန်တော်ဇာတ်ကားအပေါ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့်သူ၊ အချိန်ပေးနိုင်သူလိုတယ်။ ပြောချင်တာက ကျားကတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျားတွေလိုအရောင်ခြယ်ရမယ်။ အများကြီး ပင်ပန်းခံရမယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာက ဒီဇာတ်လမ်းကို နေတိုးကိုပြောလို့ နေတိုးကမရိုက်ဘူးလို့ငြင်းလိုက်ရင် ဒီဇာတ်လမ်းကို မရိုက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ နေတိုးကလည်း ဇာတ်လမ်းကို လက်ခံတာကြောင့် ရိုက်ဖြစ်တာပါ”ဟု ဒါရိုက်တာစတီးလ် (ဒွေးမေတ္တာ) က ပြောသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာစတီးလ် (ဒွေးမေတ္တာ) မှ ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် နေတိုး၊ နေထက်လင်း၊ ထွန်းထွန်း၊ အေးမြတ်သူ၊ ရွှေသမီး၊ လေပြေသွေးနှင့် တခြားသောအနုပညာရှင် အများအပြားမှ ပါဝင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ကျားနှင့်ဆင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးရန် ဇာတ်လမ်းအတွက် ပြင်ဆင်ချိန် ခြောက်လအချိန်ယူခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားအတွက် တနင်္သာရီတိုင်းဘက်တွင်ရိုက်ကူးရန် Location နေရာအတွက် နှစ်ကြိမ်သွားရောက် ကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး၊ မြို့ခံများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း၊ သီချင်းရှာဖွေခြင်း၊ ဆက်တင်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
''ဘယ် Group ထဲမှ ရွှေပိုးမပါဘူး။ အဲဒီလို Group တွေထဲ မပါတော့ ဇာတ်ကားတွေ သိပ်မရိုက်ရဘူး '' ရွှေပိုးအိမ်
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်တွင် ဘုရားဖူးသူများ ပြည့်ကျပ်နေ၊ တောင်တက်ကားများကို ခဏပိတ်ထားခဲ့ရ။